Free Thinker: ဂျီဒီပီ
“ပြောစရာနည်းနည်းရှိလို့ပါ” ကို ရေးလိုက်တော့ အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများဆီက email တွေပြန်လာတယ်။ အများစုက နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ ကျွန်တော်နဲ့ တစ်စိတ်ထဲ တစ်ဝမ်းထဲပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် ကို လူတိုင်း ထောက်ခံမယ်လို့ မယူဆနိုင်ဘူး။ မြန်မာပြည်ထဲကလူတွေ ဖတ်ရရင်တော့ ဆဲမလား၊ ခဲနဲ့ထုမလား။ အနည်းဆုံးတော့ နောက်ကွယ်မှာ အတင်းပြောတာ၊ တီးတိုးတီးတိုး သဖန်းပိုးလုပ်တာ၊ မျက်စောင်းထိုးသွားတာ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။
အဲဒီ ပြန်လာတဲ့စာတွေထဲမှာ ကိုရဲဂေါင် က ပြောလာတယ်။
“တစ်ခုတော့သိပ်နားမလည်ဘူး.....အစ်ကိုတွက်တဲ့ စလုံးကနေမြန်မာပြည်ကို ခန့်မှန်းပို့တဲ့ ငွေပမာဏ Unit နဲ့ Nominal GDP unit ကတူမယ် မထင်ဘူး....... အဲဒါလေးကို အကိုအချိန်ရရင် ဆွေးနွေးပေးပါလား” တဲ့။
ကျွန်တော်က “တာယာအန္တရာယ်ကင်းဝေးရေး” ရယ်။ မလေးရှားမှာထုတ်တဲ့ မဂ္ဂဇင်း ‘အပြင်စီး’ အတွက် ဆောင်းပါးရယ် (ဆောင်းပါးက ခု တနင်္ဂနွေ နောက်ဆုံးထားပေးရမယ်) တပြိုင်နက်ထဲ ရေးနေတော့ သိပ်အားလှလို့တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ကိုရဲဂေါင်ပြောလာတာ လေး အကြွေးမထားချင်လို့ ရေးလိုက်တာ။ မနက် ၆ နာရီခွဲ အိပ်ယာကထရမှာပေမဲ့ ညက အဲဒီ GDP တွေ စုနေတာ ည သန်းခေါင်ကျော်၊ ၁ ချက်တီးခါနီးသွားတယ်။ ဒါ ကိုယ်ကရေးချင်နေတာကိုး။
ဒီလိုမေးလာတဲ့ ကိုရဲဂေါင်ကို အများကြီးကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပထမဆုံးပြောပြစေ။
ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိစဉ် အရင်တုံးက နှစ်ကုန်တိုင်း စာပေဗိမာန်ကထုတ်တဲ့ အစိုးရရဲ့ တစ်နှစ်စာ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး စတဲ့ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ စာအုပ်ကြီးကို ၀ယ်ပြီးဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။ နှစ်တိုင်းမဟုတ်တောင် ရန်ကုန်ရောက်ခိုက် လမ်းကြုံရင် ၀ယ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်က စာရင်းဇယားတွေ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေကို အရမ်းဝါသနာပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က ထုတ်ကုန်တွေ၊ သွင်းကုန်တွေ၊ အစိုးရရဲ့ အသုံးစရိတ်တွေ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကို သိချင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အဲဒီစာအုပ်ကြီးကို ၀ယ်ဖတ်တာပါ။ အခါအားလျော်စွာ သတင်းစာထဲပါလာတဲ့ အဲဒီ ကိန်းဂဏန်းတွေကိုလည်း ဖြတ်ပြီးဖိုင်တွဲသိမ်းထားတာ ခုထိ ရန်ကုန်က စာအုပ်စင်ပေါ်မှာ အဲဒီ (လုပ်သားပြည်သူ့နေ့စဉ် သတင်းစာ ဖြတ်ပိုင်း) ဖိုင်ကြီးတွေ ရှိပါသေးတယ်။
အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် အစိုးရက ထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုံးလောက်ကို ကျွန်တော် အယုံအကြည်မရှိပါဘူး။ တကယ်အတိအကျ survey မလုပ်ဘဲ ရမ်းသမ်းမှန်းသမ်း တုတ်ထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေကြောင့် မို့လို့ပါ။ ဒါ့အပြင် ကောင်းတာဆို သာသာထိုးထိုးလေး လုပ်တတ်ပြီး မကောင်းတာဆို discount ချတတ်တဲ့ ၀ါသနာလည်း ပါတာကိုး။
ဒါဆို ဒီ GDP ဆိုတာကြီးကို နည်းနည်းပြန်ကြည့်ရအောင်။
Gross domestic product (GDP) refers to the market value of all goods and services produced withinacountry inagiven period. It is often considered an indicator ofacountry's standard of living. Gross domestic product is related to national accounts,asubject in macroeconomics. လို့ wikipedia မှာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ (http://en.wikipedia.org)
အတိုဆုံးအရှင်းဆုံးပြောရရင် တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ ဂျီဒီပီ ဆိုတာ အဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ နဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတန်ဘိုးအားလုံး စုစုပေါင်းရဲ့ ဈေးကွက်တန်ဘိုး ပါဘဲတဲ့။
ဒါကို ပုံသေနည်းနဲ့ ပြောရရင် -
ဂျီဒီပီ = တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ စားသုံးမှု + စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု + အစိုးရအသုံးစရိတ် + (ပို့ကုန် - သွင်းကုန်)
ဒီမှာ Gross ဆိုတာ နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ သိပြီးသားသူတွေ သည်းခံပါ။ မသိသေးတဲ့ သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ခု ခင်ဗျားတို့ ဘေးနားက ကော်ဖီပုလင်းမှာ ကပ်ထားတဲ့စာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
အဲဒီမှာ Net WT : 200g ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက ဒီပုလင်းထဲမှာပါတဲ့ ကော်ဖီမှုန့်အလေးချိန်သည် ၂၀၀ ဂရမ် ရှိပါတယ် လို့ ဆိုလိုတာပါ။ အဲဒီ ၂၀၀ ဂရမ်ထဲမှာ ပုလင်းတို့၊ ပုလင်း အဖုံးတို့၊ စက္ကူအလေးချိန်တို့ မပါပါဘူး။ ဒီပုလင်းကြီးတစ်ခုလုံးကို ချိန်ခွင်ပေါ်တင်ချိန်ကြည့်လိုက်ပါ။ ၃၅၀ ဂရမ်လောက် ဖြစ်ချင်ဖြစ် နေပါလိမ့်မယ်။ ကော်ဖီမှုန့်အပါအ၀င် အဲဒီပုလင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ အလေးချိန်သည် Gross Weight ဖြစ်ပါတယ်။ Gross Weight ထဲက ပုလင်း၊ အဖုံး၊ စက္ကူ တို့ရဲ့ အလေးချိန်ကို နှုတ်လိုက်ရင် ကော်ဖီမှုန့် အလေးချိန်ရပါမယ်။ အဲဒါ Net Weight ပါ။
ဒါဆိုရင် GDP ဆိုရာမှာ တိုင်းပြည်က ထုတ်လိုက်တဲ့ သဗ္ဗဒါနံအားလုံးပါတယ် လို့ဆိုလိုကြောင်း သဘောပေါက်လောက် ပါပြီ။
ဂျီဒီပီတွက်ပုံတွက်နည်းတွေဟာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားတွေကိစ္စမို့ အတော်လေး ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အထက်က ပုံသေနည်းကို ကြည့်လိုက်ရင်တော့ အကြမ်းဖျဉ်း ဂျီဒီပီ ဆိုတာကို ရိပ်မိလောက်ပါတယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ၊ လယ်သမားတွေရဲ့ သီးနှံအထွက်တွေ၊ လက်လီအရောင်းတွေ၊ ဆောက်လုပ် ရေးသမားတွေရဲ့ သုံးစွဲမှုတွေကစပြီး ဝန်ဆောင်မှုတွေအထိပါတယ်။ အင်မတန် ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ တစ်တိုင်းပြည်လုံးရဲ့ စီးပွားရေး ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို GDP ထဲမှာ အကုန်ထည့်သွင်း ထားတယ်။ အသေးစိတ်သိချင်ရင် အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ရည်ညွှန်း website: wikipedia မှာ ဖတ်ကြည့်ဘို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ အသေးစိတ် မရေးတော့ပါဘူး။
တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ ဂျီဒီပီ ဟာ အဲဒီတိုင်းပြည်ကလူတွေရဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းကို ဖော်ညွှန်းနေတယ် လို့ ယူဆကြပေမဲ့ စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကတော့ သဘောမကျပါဘူး။ ဂျီဒီပီတက်တိုင်း လူတွေ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်လာတာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ကမ္ဘာတစ်လွှားက အစိုးရ အတော်များများကတော့ GDP တစ်ခုတည်းကို ကြည့်ပြီး တိုင်းပြည်စီးပွားရေး တိုးတက်တယ်၊ မတိုးတက်ဘူးလို့ ပြောတတ်ကြတယ်။
နိုင်ငံတကာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်နိုင်ဘို့အတွက် နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ GDP ကို ဖော်ပြရာမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို ဖော်ပြရာမှာလည်း တိုင်းပြည်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကို နိုင်ငံတကာ ငွေလဲနှုံးအတိုင်း ပြောင်းလဲ ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပြဿနာက ဘယ်ငွေဈေးနှုံးနဲ့ ပြောင်းမလဲ ဆိုတာပါ။ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံငွေကြေးရဲ့ အစိုးရသတ်မှတ်နှုံးက (နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာ)
1 USD = Myanmar Kyats 6.51 ပဲရှိပါတယ်။ မယုံရင် online currency converter မှာ တွက်ကြည့်ပါ။ အောက်ကဇယားမှာတော့ 5.5 – 5.7 လို့ ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ဈေးကွက်မှာ ပေါက်ဈေးက ၉၀၀ လောက် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ၀င်ငွေ၊ ထုတ်ကုန်တန်ဘိုးတွေတွက်ရင် ဘယ်နှုံးနဲ့တွက်မလဲ ဆိုတာ ပြဿနာပါ။
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဂျီဒီပီ ရာခိုင်နှုံးတော်တော်များများဟာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကနေရတာ မဟုတ်ဘဲ သဘာဝ အရင်းအမြစ်တွေကို ရောင်းလို့ရတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် လို့ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးပညာရှင်များက သုံးသပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ တိုင်းပြည်မှာ ဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေ၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ GDP တိုးတက်မှုနှုံးဟာ ၂ဝဝဝ ခုနှစ်ကနေ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်အထိ ၆-နှစ်တိုင်တိုင် ၁၀ ရာခိုင်နှုံး ကျော်တယ် လို့ အတင်းအဓမ္မ ပြောနေပါတယ်။ (စင်ကာပူရဲ့ GDP ကတော့ ၂၀၁၀ မှာ ၁၄ % တက်တယ်လို့ အစိုးရကကြေငြာပါတယ်။) ဒါပေမယ်လို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) အဖွဲ့မျိုးက ၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၄ ခုနှစ်မှာ မြန်မာပြည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းက (Zero Growth) သုည ဖွံ့ဖြိုးမှုလို့တောင် တွက်ချက်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် ၄% ပဲရှိမယ်လို့ Economist Intelligence Unit အဖွဲ့ကလည်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အဓိက ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းမှာလည်း သဘာဝဓါတ်ငွေ့နဲ့ ကျောက်မျက် ရောင်းဝယ်မှုတွေပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဂျီဒီပီ နဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို အောက်က ဇယားမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေက ၂ဝဝ၆ ဇန်နဝါရီလ တုံးက ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား တယောက်ရဲ့ တစ်နှစ်ဝင်ငွေဟာ ကျပ် (၁၆၇,ဝဝဝ) ရှိတယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ခုပြောပုံကို ကြည့်ပါဦး။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် UMFCCI မှာ ပြုလုပ်တဲ့ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများ အသင်း (၁၅) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အစည်းဝေးပွဲမှာ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးရဲ့ တစ်နှစ်ဝင်ငွေဟာ ၃၄၉,ဝဝဝ ကျပ် ရှိပြီး ရန်ကုန်သားတစ်ဦး တနှစ်ဝင်ငွေ ၆၃၅,၆၆၈ ကျပ် ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါဆို ၃ နှစ်အတွင်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ဝင်ငွေ နှစ်ဆကျော် တိုးလာတယ် ဆိုတာ ဟုတ်နိုင်ပါ့မလား။ ဘယ်အထောက်အထားတွေနဲ့ ဘယ်ညွှန်းကိန်းတွေအရ ပြောတာလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ တွေမှာ ထိုင်းကို သဘာဝဓာတ်ငွေ့တင်ပို့မှုကနေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၆ဝဝ လောက်ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကိုလည်း နှစ် ၂ဝ စာချုပ်နဲ့ ဒေါ်လာ သန်း ၂၄ဝဝဝ (တနှစ်လျှင် ဒေါ်လာ သန်း ၁၂ဝဝ) ရတယ်လို့ စီးပွားရေး သတင်းတွေမှာ ဖတ်ရပါတယ်။
ကဲ ဒါဆို ကိုရဲဂေါင် မေးထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ မြန်မာပြည်ပြန်ပို့နေတဲ့ငွေတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ GDP ရဲ့ ဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲ ဆိုတာ နည်းနည်း ခန့်မှန်းကြည့်ရအောင်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြားကို ထွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာတွေ ဘယ်လောက်များသလဲ ခန့်မှန်းရခက်တဲ့အတွက် တွက်ဖို့ လွယ်တော့မလွယ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မဟုတ်နှစ်ခု၊ အဟုတ်တစ်ခု နည်းနဲ့တွက်ကြည့်မယ်။
CIA ရဲ့ The World Factbook မှာ (Ref: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) -
GDP real growth rate : 3.1% (2010 estimate)
GDP per Capita (PPP): $1100 (2010 estimate)
GDP (purchasing power parity): $60.07 billion (2010 est.)
Export : $7.841 billion (2010 est.) လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Global Finance website မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၂၀၁၀ GDP ကို US$ 35.646 billion လို့ဖော်ပြထားပြီး GDP (purchasing power parity) ကိုတော့ US$76.24 billion (2010 est.) လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီဖော်ပြချက်နှစ်ခု ကွဲလွဲနေတာကိုလည်း သတိထားမိကြပါလိမ့် မယ်။ ဒါပေမဲ့ ခန့်မှန်းခြေအနေနဲ့ပဲ တွက်ပါမယ်။
တကမ္ဘာလုံးကို ထွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိမလဲ။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးလူဦးရေ သန်း ၆၀ လောက်ရှိတယ်။ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အရွယ်က ၆၅ % ပဲရှိတယ်။ ဒါဆို ၃၉ သန်း အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်အလုပ်လုပ်တာကျ အဲဒါရဲ့ ၈၀ % ပဲ ရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ ၂၀ % က ဟေးလားဝါးလား ကင်မွန်းကြိုင်နေကြတာ။ ဒီတော့ တကယ် အလုပ်လုပ်တာ ၃၁ သန်းပဲ ရှိတယ်။ ဒါဆို အကြမ်းဖျဉ်း ခန့်မှန်းလို့ရပြီ။ နိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်နေတာ ဆယ်သန်းမရှိနိုင်တော့ဘူး။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ သူတိုင်းလည်း အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ မှီခိုတွေ အများကြီးပါနေတယ်။ မလေးရှားနဲ့ထိုင်းမှာတော့ အများဆုံးပဲ။ စင်ကာပူ၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုးရီးယား၊ တရုတ်၊ ယူအေအီး၊ ဒူဘိုင်း၊ အမေရိကား၊ အင်္ဂလန်၊ သြစတေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ ကနေဒါ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ နော်ဝေ အများကြီးပါ။ စုလိုက်ရင် တစ်သန်းခွဲလောက်တော့ ရမယ်ထင်တယ်။ ထားပါ တစ်သန်းပဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ပို့စ်မှာ ကျွန်တော်က မြန်မာပြည် ပြန်ပို့တဲ့ငွေကို လူတစ်ယောက် မြန်မာငွေ တစ်သိန်းနဲ့တွက်တာ။ ဘယ်နည်းနဲ့မှ တစ်သိန်းမကဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တစ်သိန်းဆိုတာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကျော်ကလေးပဲရှိတာ။ အနောက်နိုင်ငံမှာ ရောက်နေတဲ့သူတွေဆို ကျွန်တော်တို့ထက် လခ အများကြီး ပိုကောင်းမှာ။ သြစတေးလျရောက်နေတဲ့ ကိုရေချမ်းတောင် ဂဟေဆော်တာ ကျွန်တော် (အင်ဂျင်နီယာ) ထက် လခပိုကောင်း တယ်။ ဒီတော့ ပျမ်းမျှ တစ်ယောက်ကို တစ်လ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ပြန်ပို့တယ်လို့ မှန်းရအောင်။
ဒါဆို မြန်မာပြည်ကို တစ်လ တစ်လ ၀င်နေတဲ့ ငွေ ဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲ။
တစ်ယောက် US$ ၅၀၀ x လူ တစ်သန်း = US$ သန်း ၅၀၀
တစ်နှစ် အတွက်ဆို - US$ သန်း ၅၀၀ x ၁၂ လ = US$ သန်း ၆၀၀၀ = US$6Billion (များတယ်ထင်ရင် လျှော့ချလိုက်ပါ။ US$ 1 Billion)
မြန်မာပြည်ရဲ့ ၂၀၁၀ GDP က US$ 35.646 billion ဆိုတော့ -
ကျွန်တော်က မနေနိုင်မထိုင်နိုင် အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး (ဘာတစ်ပြားမှအကျိုးမရှိဘဲ) တွက်ပြလိုက်ပြီ။ ဟုတ်နိုင်၊ မဟုတ်နိုင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ချင့်ချိန်သာကြည့်ပေတော့ဗျို့။
ဖိလစ်ပိုင်မှာ လူဦးရေ သန်း ၉၀ ရဲ့ ဆယ်ပုံတစ်ပုံဟာ ပြည်ပကိုထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ သူတို့တွေ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပြန်ပို့တဲ့ငွေဟာ ဂျီဒီပီ ရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရော။
ခု နာရီပြန် တစ်ချက်တီးခွဲနေပြီ။ အိပ်တော့မယ်။
Report of Economist Intelligence Unit
Posted by အေးငြိမ်း at 1:35 AM
Nyi Nyi Aung said...
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အခုလို တွက်ပြလိုက်တော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရပါပီခင်ဗျာ
ခရစ္စတိုဖာ ပေါက်ကျိုင်း ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၄)
တာယာအန္တရာယ် ကင်းဝေးရေး (၁)
ပညာသင်ကြားရခြင်း ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်